G657A2 Fiber Optic Sensor များအတွက် Fiber Optic Splitter, Lc Lc St St Coupler - The Cableonline.com
Fiber optic patch panel ကို
တစ်မျိုးတည်းသော Fiber Optic Cable၊ သံချပ်ကာ Fiber Cable ...
အပြင်ဘက် Multimode Fiber Optic Cable အနက်ရောင် PE ဂျာကင်အင်္ကျီ ...
Single Window ပါ ၀ င်သည့် FBT Fiber Optic Cable Splitter ...
G657A2 Fiber Optic Sensor အတွက် Fiber Optic Splitter ...
LGX PLC SC APC Simplex နှင့်အတူ Fiber Optic Splitter Box ...
G657A2 Fiber Optic Sensor များအတွက် Fiber Optic Splitter, Lc Lc St St Coupler
အသေးစိတ်ကုန်ပစ္စည်းဖော်ပြချက် Connector အမျိုးအစား: SC, FC, LC, ST Ferrule အဆုံး - PC, UPC, APC Fiber အမျိုးအစား - G652D G657A1 G657A2 Fiber Mode: Singlmode Package: သံမဏိတိုင်၊ ABS ဖွဲ့စည်းပုံ - 1 × 322× 32 G657A2 Fiber PLCFiber Fiber Optical Sensor များအတွက် Optic Splitter ဖော်ပြချက်: PLC Fiber Optic Splitter သည် micro-optical ဒြပ်စင်တစ်ခုဖြစ်ပြီး photolithographic နည်းစနစ်များကို အသုံးပြု၍ အလယ်အလတ်သို့မဟုတ် semiconductor အလွှာတွင် optic waveguide ဖွဲ့စည်း၍ ဌာနခွဲ၏ဖြန့်ဖြူးသောလုပ်ဆောင်ချက်။ ဖိုင်ဘာ splitter ရရှိနိုင်ပါသည် ...
Fiber Optical Sensor များအတွက် G657A2 Fiber PLCFiber Optic Splitter
PLC Fiber optic splitter သည် micro-optical element တစ်ခုဖြစ်ပြီး photolithographic နည်းစနစ်များကို အသုံးပြု၍ အလတ်စားသို့မဟုတ် semiconductor အလွှာတွင် branch wave (သို့) Semiconductor အလွှာတွင်ဖွဲ့စည်းပြီး branch ကိုဖြန့်ဖြူးတဲ့လုပ်ဆောင်ချက်ကိုသဘောပေါက်ဖို့ photolithographic နည်းနာကိုအသုံးပြုတယ်။
ဖိုင်ဘာ splitter 1 × 2, 1 × 3, 1 × 4, 1 × 5, 1 × 6, 1 × 8, 1 × 12, 1 × 16, 1 × 18, 1 × 32 နှင့် 1 × 64 configurations နှင့်အတူရရှိနိုင်ပါသည်။ တစ်ခုတည်းသော mode သို့မဟုတ် multimode ဖိုင်ဘာများဖြစ်သောကျွန်ုပ်တို့သည် SC, FC, ST, LC နှင့် E2000 စသည့် pre-connectorized အမျိုးအစားများကိုကျွန်ုပ်တို့ကမ်းလှမ်းသည်။
အနိမ့် polarization ကိုမှီခိုဆုံးရှုံးမှု
Optional Split အချိုး ၂၀/၈၀၊ ၄၀ / ၆၀ … (ပုံမှန်အားဖြင့် ၅၀/၅၀ ။ )
သေးငယ်တဲ့ application area များအတွက်ပိတ်ပစ်သို့မဟုတ် splice ဗန်းများ
ကျယ်ပြန့်သော operating အပူချိန်နှင့်လှိုင်းအလျား
အလွန်ကောင်းမွန်သောပတ် ၀ န်းကျင်နှင့်စက်မှုတည်ငြိမ်မှု
Telcordia GR-1221 နှင့် GR-1209 လက်အောက်တွင်အရည်အချင်းပြည့်မီသည်
သံမဏိပြွန် - ကျစ်လစ်သိပ်သည်းအရွယ်အစား
FBT Splitters အတွက် Fiberstore သည်ဤအမျိုးအစားမျိုးစုံအတွက်သီးသန့်စီစဉ်ထားသည်
ဇယား ၁ - ၁ × N PLC Fiber Splitter
လှိုင်းအလျား operating (nm) 1260 ～ 1650
ဖိုင်ဘာအမျိုးအစား G657A သို့မဟုတ်ဖောက်သည်သတ်မှတ်ထားသော
ထည့်သွင်းဆုံးရှုံးမှု (dB) (P / S အဆင့်) ၃.၈ / ၄.၀ ၇.၁ / ၇.၃ 10.2 / 10.5 13.5 / 13.7 16.5 / 16.9 20.5 / 21.0
Loss Uniformity (dB) 0.4 ၀.၆ ၀.၈ ၁.၂ ၁.၅ ၂.၀
ပြန်လည်ဆုံးရှုံးမှု (dB) (P / S အဆင့်) ၅၅/၅၀ ၅၅/၅၀ ၅၅/၅၀ ၅၅/၅၀ ၅၅/၅၀ ၅၅/၅၀
Polarization မှီခိုဆုံးရှုံးမှု (dB) ၀.၂ ၀.၂ ၀.၂ ၀.၂၅ ၀.၃ ၀.၃၅
ညွှန်ကြားမှု (dB) 55 55 55 55 55 55
လှိုင်းအလျားမှီခိုမှုဆုံးရှုံးမှု (dB) ၀.၃ ၀.၃ ၀.၃ 0.5 0.5 0.5
အပူချိန်တည်ငြိမ်မှု (-40 ～ 85 ℃) (dB) 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5
လည်ပတ်မှုအပူချိန် (℃) -40 ～ 85
သိုလှောင်သည့်အပူချိန် (℃) -40 ～ 85
အထုပ် သံမဏိပြွန်သို့မဟုတ် ABS
စားပွဲတင်2-2× N ကို PLC Fiber Splitter ကို
ထည့်သွင်းဆုံးရှုံးမှု (dB) ၄.၀ ၇.၆ ၁၁.၀ ၁၄.၄ ၁၇.၅ ၂၁.၀
Loss Uniformity (dB) ၀.၆ ၁.၀ ၁.၂ ၁.၅ ၁.၈ ၂.၂
Polarization မှီခိုဆုံးရှုံးမှု (dB) ၀.၂ ၀.၂ ၀.၃ ၀.၃ 0.4 0.4
လှိုင်းအလျားမှီခိုမှုဆုံးရှုံးမှု (dB) ၀.၃ 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5
connector ကိုတစ် ဦး အပိုဆောင်း 0.15dB အရှုံးထည့်ပါ
ရှေ့သို့ SC Fast Connector အတွက် KcRP နှင့် Steel နှင့်အတူ 4core 12core FTTH Network Drop Cable
999 / Piece Min.Order အရေအတွက် - 100 Piece / Pieces Supply နိုင်စွမ်း - 10000 Piece / Pieces တစ်လလျှင်ဆိပ်ကမ်း: Shenzhen Payment သတ်မှတ်ချက်များ: L / C
FOB ဈေးနှုန်း - အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၀.၅ - ၉
PX splitter 1X2 0.9mm 1m mini သံမဏိပြွန်
1 * 16 ABS အနက်ရောင် Box Fiber Optic Splitter ကိုအသုံးပြုထားသော3။
မြင့်မားသောယုံကြည်စိတ်ချရသော ABS Box Optical Cable Splitter ...
Drop Fiber Opti ၏ပြandနာများနှင့်ဖြေရှင်းနည်းများ ...